अर्थमन्त्री र सचिवहरुबिच तालमेल मिलेन, रकमान्तर बढ्यो (सूचि सहित) -
अर्थमन्त्री र सचिवहरुबिच तालमेल मिलेन, रकमान्तर बढ्यो (सूचि सहित)खर्च गर्ने संयन्त्र कमजोर
अर्थ बुलेटिन संवाददाता ३१ बैशाख, २०७६
काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले जेष्ठ १५ मा ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा चुक्दै गएको छ ।
खर्च गर्ने संयन्त्र कमजोर रहँदा चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा सरकार आफैँले विकास बजेट कार्यन्वयन गर्न चुकेको हो ।
महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक
मुलुकमा प्रशासनिक बढ्दा चालू खर्चले बढिरहेको छ तर पूँजिगत खर्च बढ्नै सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको चैत्र २४ सम्ममा चालू खर्च ५३ प्रतिशत पुगेको छ भने विकास खर्च ३२ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्रै खर्चभएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ  २९ दशमलव २३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।
विकासे र धेरै पुँजीगत खर्चको जिम्मा पाएका मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता नलिँदा यस्तो अवस्था आएको अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अर्थमन्त्रालयबाटै बजेटको अनुगमन हुन सकेको छैन ।
खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नभएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडाले कुनै पनि काममा ढिलाइ नगर्न पटकपटक निर्देशन दिदै आएका छन् । तैपनि मन्त्रालयका सचिवहरुको कार्यशैलीमा कुनै फेरबदल गरेका छैन वरु अर्थमन्त्री र सचिवहरु विचको दुरी वढेको छ, तिक्तता वदेको छ । सचिवहरुले मन्त्री खतिवडाको निर्देशन समेत लत्याउँदै आएका छन् । यसले, मन्त्री र सचिवहरुविचको तालमेल नमिलेको प्रष्ट भान हुन्छ ।
सरकारले विकासबजेट राम्रोसँग खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा  राजस्व संकलन पनि  खासै राम्रो प्रगती देखिएको छैन । चैत्र २४ सम्ममा जम्मा ५६.५८ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । राजश्व चुहावट रोकी संकलन बढाउन अर्थमन्त्री खतिवडाले पटकपटक दिने गरेको निर्देशनलाई राजश्व प्रशासनका अधिकारीहरुले समेत लत्याउँदै आएका छन् ।
“समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को अभियानलाई धक्का
यसले सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई धक्का पुग्ने जानकारहरुको बुझाई छ । अर्थविद् डा. डिल्ली खनालले सरकारको खर्च गर्ने प्रणाली नसुध्रिए खर्च गर्ने क्षमता बढ्न नसक्ने बताउछन् । उनका अनुसार अहिले बजेट प्रणाली र राजस्व प्रशासनमा ब्यापक सुधार गरेमात्रै मुलुक खर्च क्षमता बढ्ने र राजश्वमा सुधार आउनेछ ।
सवल अर्थमन्त्रीको दुर्वल अवस्था
बजेट खर्चमा कमजोर देखिएको सरकारले आफूखुसी रकमान्तर गरिरहेको छ । सबल अर्थमन्त्रीका रुपमा आफुलाई चिनाउन खोज्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनावश्यक रकमान्तरमा कडाई गर्ने बताइरहँदा फागुनमा मात्रै अर्थमन्त्रालयले १८ अर्ब रकमान्तर गरेको हो । विदेश भम्रणदेखि आर्थिक सहायता वितरणसम्ममा सरकारले ठूलो रकम रकमान्तर गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसले सरकारको काम आफूखुसी रकमान्तर गर्ने जस्तो देखिएको छ ।
सरकारले फागुनमा गरेको रकमान्तरको सूची यस्तो छ....